အသက်(၄၀) အရွယ်မမတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဆံပင်စတိုင်လ် (၅) မျိုး - For her Myanmar
“Age is justanumber” – အသက်အရွယ်ဆိုတာ နံပါတ်တစ်ခုပါပဲတဲ့။ သိပ်မှန်တာပေါ့ … ဘယ်အသက်အရွယ် ရောက်ရောက် စိတ်ပျိုကိုယ်နုနေရင် ဒီနံပါတ်နှစ်လုံးတွဲလေးကို ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ဒီနေ့တော့ Stella က အသက် (၄၀) ကျော်မမတွေအတွက် နုပျိုတဲ့အသွင်ပေးမယ့် ဆံပင်ပုံဆန်းလေးတွေကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ရပါတယ်နော်။
(၁) ခပ်ချွန်ချွန် bob ဆံပင်စတိုင်လ်
ဟောလီးဝုဒ်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ Charlize Theron လိုမျိုး အရှေ့ခပ်ချွန်ချွန်နဲ့ ဂုတ်မထောက်တဲ့ Bob ဆံပင်ပုံစံက ယောင်းတို့ကို အနှစ် (၂၀) လောက်ပြန်ငယ်သွားစေမှာပါ။
(၂) အထပ် ဆံပင်စတိုင်လ်
Denise Richards လိုမျိုး ဆံပင်အရှည်ကိုမှ ခပ်ပွပွပုံစံလေးဖြစ်အောင် အထပ်အထပ်လေးတွေ ညှပ်တာကလည်း ငယ်ရွယ်တဲ့အသွင်ကို ပေးတဲ့အပြင် ရင့်ကျက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသွင်ပါ ဖြည့်စွက်ပေးတာကြောင့် အသက် (၄၀) အရွယ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး။
Related article >>> ဆံပင်ပါးတဲ့ယောင်းတွေအတွက် Hair styling လုပ်နည်း (၅) နည်း
(၃) လှိုင်းတွန့် bob ဆံပင်စတိုင်လ်
Keri Russell ညှပ်ထားတဲ့ Bob ဆံပင်တိုကိုမှ ၆၀ ခုနှစ်တွေတုန်းကလို အခွေအလိပ်လေးတွေကို ဖက်ရှင် runway တွေမှာ တောက်လျှောက်တွေ့နေရပြီမို့ မကြာခင်မှာ ပြန်ခေတ်စားလာတော့မှာပါ။ လှိုင်းတွန့်များများနဲ့ ဒီဆံပင်ပုံစံက မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေကို လူတွေသတိမထားမိတော့အောင် မျက်စိလှည့်စားပေးတာကြောင့် ဒီဆံပင်ပုံမှ မညှပ်ရင် ဘယ်ပုံညှပ်မလဲနော့ …
(၄) ဘာဘီ ဆံပင်စတိုင်လ်
ဘာဘီအရုပ်မလေးလို အသွင်က ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေပဲ ရနိုင်တာလို့ ဘယ်သူပြောလဲ ? ဘာဘီလေးလို ဆံပင်အခွေအလိပ်လေးတွေနဲ့ စွန်းလန်းနေတဲ့ Elle MacPherson ကိုပဲကြည့်။ အသက် (၄၀) လို့ ထင်ရက်စရာကို မရှိတာ။ ဒီဆံပင်ပုံစံကို ရွေးတော့မယ်ဆိုရင် ပေးချင်တဲ့ အကြံဉာဏ်ကတော့ အရောင်လင်းလင်းလေးဆိုးဖို့ပါ။ ဆံပင်အရောင်လင်းလင်းလေးက အခွေအလိပ်လေးတွေကို ပိုပေါ်လွင်စေပြီး မျက်နှာကိုလည်း ငယ်နုတဲ့ အသွင်အပြင်ပေးပါတယ်။
Related article >>> ဆံပင်ညှပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ Lob Hair စတိုင်လ် (၁၀)မျိုး
(၅) တိုတိုကပ်ကပ် ဆံပင်စတိုင်လ်
၆၀ နဲ့ ၈၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက မင်းသမီးကြီးတွေ၊ စူပါမော်ဒယ်တွေ အပြိုင်အဆိုင်ညှပ်ခဲ့ကြတဲ့ တိုပေ့ကပ်ပေ့ဆိုတဲ့ ဆံပင်ပုံစံတွေကလည်း တစ်ခေတ်ဆန်းလာဦးမှာပါ။ နာမည်ကျော် ဂန္ထဝင်မင်းသမီးကြီး Audrey Hepburn ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံလို အတိုအကပ်ဆံပင်လေးကိုမှ အခွေအလိပ်လေးတွေနဲ့ဆို ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှတဲ့အပြင် အလုပ်ရှုပ်လည်း သက်သာတာပေါ့။
ကဲ … အသက် (၄၀) ကျော်မမတွေအတွက် အလန်းလွန် အလွန်လန်းပြီး ဖလန်းဖလန်းထလို့ရမယ့် ဆံပင်ပုံစံတွေတော့ စုစည်းတင်ဆက်ပေးပြီးပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ စိတ်ပျိုကိုယ်နုဘဝကို ရှေ့ဆက်ရမှာက ယောင်းတို့တာဝန်နော်။
“Age is justanumber” – အသကျအရှယျဆိုတာ နံပါတျတဈခုပါပဲတဲ့။ သိပျမှနျတာပေါ့ … ဘယျအသကျအရှယျ ရောကျရောကျ စိတျပြိုကိုယျနုနရေငျ ဒီနံပါတျနှဈလုံးတှဲလေးကို ဂရုစိုကျစရာမလိုပါဘူး။ ဒီနတေ့ော့ Stella က အသကျ (၄၀) ကြျောမမတှအေတှကျ နုပြိုတဲ့အသှငျပေးမယျ့ ဆံပငျပုံဆနျးလေးတှကေို တငျဆကျပေး လိုကျရပါတယျနျော။
(၁) ခပျခြှနျခြှနျ bob ဆံပငျစတိုငျလျ
ဟောလီးဝုဒျဒိတျဒိတျကွဲ Charlize Theron လိုမြိုး အရှခေ့ပျခြှနျခြှနျနဲ့ ဂုတျမထောကျတဲ့ Bob ဆံပငျပုံစံက ယောငျးတို့ကို အနှဈ (၂၀) လောကျပွနျငယျသှားစမှောပါ။
(၂) အထပျ ဆံပငျစတိုငျလျ
Denise Richards လိုမြိုး ဆံပငျအရှညျကိုမှ ခပျပှပှပုံစံလေးဖွဈအောငျ အထပျအထပျလေးတှေ ညှပျတာကလညျး ငယျရှယျတဲ့အသှငျကို ပေးတဲ့အပွငျ ရငျ့ကကျြတဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျအသှငျပါ ဖွညျ့စှကျပေးတာကွောငျ့ အသကျ (၄၀) အရှယျနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးဆိုတာ ငွငျးမရပါဘူး။
Related article >>> ဆံပငျပါးတဲ့ယောငျးတှအေတှကျ Hair styling လုပျနညျး (၅) နညျး
(၃) လှိုငျးတှနျ့ bob ဆံပငျစတိုငျလျ
Keri Russell ညှပျထားတဲ့ Bob ဆံပငျတိုကိုမှ ၆၀ ခုနှဈတှတေုနျးကလို အခှအေလိပျလေးတှကေို ဖကျရှငျ runway တှမှော တောကျလြှောကျတှနေ့ရေပွီမို့ မကွာခငျမှာ ပွနျခတျေစားလာတော့မှာပါ။ လှိုငျးတှနျ့မြားမြားနဲ့ ဒီဆံပငျပုံစံက မကျြနှာပျေါက အရေးအကွောငျးတှကေို လူတှသေတိမထားမိတော့အောငျ မကျြစိလှညျ့စားပေးတာကွောငျ့ ဒီဆံပငျပုံမှ မညှပျရငျ ဘယျပုံညှပျမလဲနော့ …
(၄) ဘာဘီ ဆံပငျစတိုငျလျ
ဘာဘီအရုပျမလေးလို အသှငျက ဆယျကြျောသကျကောငျမလေးတှပေဲ ရနိုငျတာလို့ ဘယျသူပွောလဲ ? ဘာဘီလေးလို ဆံပငျအခှအေလိပျလေးတှနေဲ့ စှနျးလနျးနတေဲ့ Elle MacPherson ကိုပဲကွညျ့။ အသကျ (၄၀) လို့ ထငျရကျစရာကို မရှိတာ။ ဒီဆံပငျပုံစံကို ရှေးတော့မယျဆိုရငျ ပေးခငျြတဲ့ အကွံဉာဏျကတော့ အရောငျလငျးလငျးလေးဆိုးဖို့ပါ။ ဆံပငျအရောငျလငျးလငျးလေးက အခှအေလိပျလေးတှကေို ပိုပျေါလှငျစပွေီး မကျြနှာကိုလညျး ငယျနုတဲ့ အသှငျအပွငျပေးပါတယျ။
Related article >>> ဆံပငျညှပျမယျလို့ စိတျကူးလိုကျသူတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ Lob Hair စတိုငျလျ (၁၀)မြိုး
(၅) တိုတိုကပျကပျ ဆံပငျစတိုငျလျ
၆၀ နဲ့ ၈၀ ခုနှဈတှတေုနျးက မငျးသမီးကွီးတှေ၊ စူပါမျောဒယျတှေ အပွိုငျအဆိုငျညှပျခဲ့ကွတဲ့ တိုပကေ့ပျပဆေို့တဲ့ ဆံပငျပုံစံတှကေလညျး တဈခတျေဆနျးလာဦးမှာပါ။ နာမညျကြျော ဂန်တဝငျမငျးသမီးကွီး Audrey Hepburn ရဲ့ ဆံပငျပုံစံလို အတိုအကပျဆံပငျလေးကိုမှ အခှအေလိပျလေးတှနေဲ့ဆို ယဉျယဉျလေးနဲ့ လှတဲ့အပွငျ အလုပျရှုပျလညျး သကျသာတာပေါ့။
ကဲ … အသကျ (၄၀) ကြျောမမတှအေတှကျ အလနျးလှနျ အလှနျလနျးပွီး ဖလနျးဖလနျးထလို့ရမယျ့ ဆံပငျပုံစံတှတေော့ စုစညျးတငျဆကျပေးပွီးပွီ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ စိတျပြိုကိုယျနုဘဝကို ရှဆေ့ကျရမှာက ယောငျးတို့တာဝနျနျော။
Tags: Beauty, cuts, hair, Hair Style, look, tips